डा. केसीको मुटुले एक्कासि काम गर्न नसक्ने जोखिम बढेको चिकित्सकको भनाई:: Naya Nepal
डा. केसीको मुटुले एक्कासि काम गर्न नसक्ने जोखिम बढेको चिकित्सकको भनाई
काठमाडौँ, २४ असोज । अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुले एक्कासि काम गर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसारर डा. केसीको मुटुमा हरेक मिनेटमा असामान्य धड्कन देखिएको छ । यसबाट एक्कासि मुटुले काम गर्न नसक्ने (सडन कार्डियाक एरेस्ट) जोखिम बढेको र यसअघिका अनशनभन्दा स्वास्थ्यस्थिति जटिल देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् ।
६४ वर्ष पुगिसकेका डा। केसीको यसअघि १५ औं अनशन २७ दिनसम्म चलेको थियो । डा. केसीको मुटुमा असामान्य धड्कन बढ्दै जाँदा मुटुको चालमा गडबड भएर सडन कार्डियाक एरेस्ट हुन सक्ने चिकित्सकहरुको अनुमान रहेको छ । पछिल्लो समय डा. केसी शारीरिक रूपमा अत्यन्त कमजोर भएका छन् ।
छातीमा दुखाइ, थकाइ, मांसपेशी दुखाइसँगै बाउँडिने, चक्कर लाग्ने जस्ता समस्या निरन्तर देखिएका छन् । उनलाई न्यून परिश्रममा समेत सास फेर्न गाह्रो भइरहेको चिकित्सकले बताएका छन् । केसीको रगतमा सेतो रगतको मात्रा अत्यन्तै कम छ। उनको रगतमा सुगरको मात्रा पनि कम छ।
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका दुई वडा सिल
डोटी कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएपछि डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकाे वडा नम्बर ६ र ९ सिल गरिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष सन्तोष बोहराले दिएको जानकारी अनुसार उक्त वडाका एक पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ।
निज पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुिष्ट भएसँगै उक्त वडाको नाचनथलीदेखि मुनी, कलेनजाने बाटोदेखि माथी, जिल्ला अस्पताल जाने बाटो माथि र नाचनथली मोडभन्दा मुनी सिल गरिएको वडाअध्यक्ष बोहराले बताए। सिल गरिएको चार किल्लाभित्र आवतजावत गर्न निषेध गरिएको छ।
त्यस्तै नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ को मल्लो कलेनाका एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मल्लो कलेना सिल गरिएको वडाअध्यक्ष धर्म साँउदले बताए। संक्रमित कृषि विकास बैंक सिलगढी शाखामा कार्यरत रहेको र उनीलाई संक्रमण देखिएपछि मल्लो कलेना सिल गरिएको वडाअध्यक्ष साउँदले बताए।
सिल भएका स्थानमा बसोबास गरिहेका स्थानीयको कोरोना परीक्षण हुने बताइएको छ। दुवै वडामा असोज ३० गरेसम्म सिल कायम रहने वडा कार्यालयले जनाएका छन्।
जाजरकोट, २४ असोज: कोरोना भाइरस महामारी रोगथाम तथा नियन्त्रणका लागि जाजरकोटका सात स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म रु साढे छ करोड खर्च गरेको पाइएको छ । गत चैतदेखि असारसम्म क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र राहत वितरणमा जिल्लाका सात स्थानीय सरकारले रु छ करोड ६८ लाख ६६ हजार २६६ खर्च गरेका हुन् । साउनयताको हिसाब सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
दशैंको मुखमा कोरोना संक्रमण भयावह, सरकार कडा कदमको तयारीमा
काठमाडौं, २४ असोज । अहिलेसम्मकै सर्वाधिक एकै दिनमा ५ हजार कोरोना भाइरसका संक्रमित संख्या नाघेपछि स्थिति भयावह बनेको छ । यो हप्ता दुई, तीन, चार गर्दै आज एकै दिन पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएपछि स्थिति भयावह बनेको हो ।
विगतमा २५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन सिफारिश गर्ने बताएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यस्तो जानकारी दिएका थिए । अहिले देशमा सक्रिय संक्रमित संख्या ३० हजार नाघेको छ । कुल ३० हजार ८ सय १८ सक्रिय संक्रमित संख्या पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलले जानकारी दिएको छ ।